सत्ता लोलुपताले देश बन्धक : डा. भट्टराई | eAdarsha.com
सत्ता लोलुपताले देश बन्धक : डा. भट्टराई
चितवन, २७ बैशाख। नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरू सत्ताको पछि लागेका कारण देशले निकास पाउन नसकेको बताएका छन्।
नयाँ शक्ति नेपाल चितवनले शनिबार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दलहरू सत्तालोलुप भएकै कारण प्राप्त लोकतन्त्र पनि गुम्ने खतरा बढेको बताए।
दलहरू जालझेल गरेर सत्तामा पुग्नेमात्र दाउमा रहेको भन्दै उनले राजनीतिक स्थिरताले मात्रै देशको विकास हुने बताए। सत्ता र शक्तिको दाउमा लागेका दलहरूबाट राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने भएकाले दलहरू जनताप्रति बफदार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक स्थिरता अन्त्यका लागि संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख राखिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले बताए।
व्यवस्थापिका संसदलाई समानुपातिक रुपमा राखेर कानुन निर्माणका लागिमात्र प्रयोग गर्दै कार्यपालिकालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएर स्थिर सरकार दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अरुलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रवादी नभइने भन्दै उनले दलका नेताहरूलाई देश र जनताका समस्या समाधानमा लाग्न आग्रहसमेत गरे।
अव देशको विकासका लागि आर्थिक सम्वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सभालाई नयाँ शक्ति नेपालका सचिवालय सदस्य मुमाराम खनाल, करिश्मा मानन्धर, कलावति शर्मालगायतले सम्बोधन गरेका थिए।